Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal महिलाले किन श्रीमान्‌को थर प्रयोग गर्छन् ? | Aafno Khabar
महिलाले किन श्रीमान्‌को थर प्रयोग गर्छन् ?
२०७७ आश्विन २२ गते प्रकाशित
एजेन्सी । अमेरिकामा विवाहपछि (करिब ७० प्रतिशत) महिलाले आफ्ना श्रीमान्‌को थर अपनाउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सन् २०१६ मा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार ब्रिटेनमा त्यसो गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या करिब ९० प्रतिशत छ। ती मध्ये करिब ८५ प्रतिशत चाहिँ १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका छन्।
यति धेरै महिलाहरूले आफ्नो श्रीमान्‌को थर राख्नु आश्चर्यजनक छ। किनकी यो पितृसत्तात्मक इतिहासबाट निर्देशित छ, यस्तो सोच जसमा विवाहपछि महिला एक पुरुषको सम्पत्ति बन्न पुग्छन्, यूकेस्थित युनिभर्सिटी अफ ब्राडफोर्डमा पारिवारिक जीवन विषयका प्राध्यापक साइमन डङ्कनले भने।
उनले पुरुषको थर अपनाउने अभ्यासबारे अनुसन्धान समेत गरिरहेका छन्। स्पेन, आइसल्यान्ड अनि ग्रीसजस्ता केही देशबाहेक अधिकांश पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरूमा पनि यो प्रथा व्याप्त छ।
यूके र नर्वेमा नव विवाहितहरू अनि विवाहको तयारी गर्दै गरेकाहरूसँग गरिएको लामो कुराकानी अनि हाल उपलब्ध अध्ययनहरूको गहन विश्लेषणबाट डङ्कनको टोलीले दुईवटा मुख्य कारण पाए।
पहिलो पितृसत्तात्मक शक्तिको जड र दोस्रो असल परिवारको आदर्श जसमा आफ्नो जीवनसाथीसँगको साझा नाम हुनुले प्रतिवद्धताको सङ्केत गर्ने र आफू अनि आफ्ना सम्भावित बच्चाहरूलाई एक ढिक्का रूपमा प्रस्तुत गर्ने बुझाइ पाइन्छ।
उनको टोलीले तयार पारेको शोधपत्रले के सङ्केत गर्छ भने नाम परिवर्तन गर्ने महिलाहरू अन्य पितृसत्तात्मक परम्परासँग पनि जोडिएका छन्।
उनीहरूको टोलीले देखेको अर्को कारण सार्वजनिक विचारसँग सम्बन्धित छन्। जीवनसाथीको नाम अपनाउनु सम्बन्धप्रति आफ्नो प्रतिवद्धता र बाहिरी दुनियालाई आफूहरूबीच एकता रहेको देखाउने तरिका रहेको उक्त टोलीको निचोड छ।
मलाई लाग्छ की यसले हामीलाई एक व्यक्ति मात्रै नभएर परिवारका रूपमा पहिचान दिएको छ, क्यालीफोर्नियाकी लिन्डसे एभान्सले भनिन्।
हाम्रो पहिलो अनि बीचको नामले व्यक्तिगत पहिचान गराउँछ। तर एउटै थर हुनाले हामीलाई एक भएको प्रत्याभूति दिलाउँछ।
आदर्श परिवारको धारणा सन्तान भएका महिलामा अझ प्रगाढ भएको शोधपत्रमा उल्लेख छ। विवाह गर्दा थर बदल्न नमानेकाहरूले समेत आमा बनेपछि आफ्नो दृष्टिकोण बद्लेको पाइएको छ।
डङ्कनको अध्ययनले अभिभावकहरूमा रहेको अर्को समान धारणाको पनि चर्चा गरेको छ। फरक–फरक थर हुँदा आफ्ना सन्तान अलमल पर्न सक्ने वा खुसी नहुन सक्ने विषयबारे उनीहरू चिन्तित छन्।
के भविष्यमा धेरै मानिसहरूले थर फेर्ने छन् ?
भविष्यमा समेत थर अपनाउने प्रथा कायम रहने नरहने विषयमा शोधकर्ताहरूबीच बहस भइरहेको छ।
हालसम्म निकै सुस्त गतिमा प्रगति अनि महिला र परुष दुवै अन्य विकल्पबारे खुला रहेको अवस्थासँग जोडिएर केही सङ्केत देखिए पनि उक्त विषयको अनुमान गर्न सक्ने निकै कम अध्ययन भएका छन्।
सन् २०१६ मा यूकेमा १,५०० भन्दा बढी मानिसमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५९ प्रतिशत महिलाहरूले विवाह पछि थर फेर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै ६१ प्रतिशत पुरुषहरूको आफ्ना श्रीमतीले त्यस्तो गरुन् भन्ने चाहना रहेको बताइएको छ।
यो सङ्ख्या उच्च देखिए पनि हालको समयमा यो परम्परा अपनाउने ब्रिटिश सर्वसाधारणहरूको अनुपातमा भने करिब ३० प्रतिशत कम हो।
त्यस्तै एउटा अर्को सर्वेक्षणले यूकेका १८ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका ११ प्रतिशतले विवाह पश्चात् आफ्नो अनि श्रीमान् दुवैको थर राख्ने गरेको देखाएको छ।
हामीले यस विषयमा पहिले पनि कुरा गरेका थियौ र हामीले एक अर्काको सबै कुरा साटेको हुँदा थर अपनाउन उचित ठान्यौँ, दक्षिणी स्विडेनमा बस्ने ३६ वर्षे निक निलसन–बीनले भने।
मेरो मात्र थर राख्नु पुरातन अनि पुरानो शैली लाग्यो। अमेरिकामा पनि दुवैको थर राख्ने चलन बढ्दो क्रममा छ।
केही दम्पतीले भने दुवैको थर मिसाएर नयाँ बनाउने र केही पुरुषले श्रीमतीको थर अपनाउने गरेको पनि पाइन्छ। तर यी दुवै घटना असामान्य हुन। -बीबीसी
आज दशैंको तेस्रो दिन, चन्द्रघण्टा देवीको पूजा गरिँदै
१३ जनामा कोरोना देखिएपछि १ करोड १६ लाखको परीक्षण